Igwe onyonyo onyonyo na nchedo 360 | Akụrụngwa Akụkọ
Akụkọ akụrụngwa | 17/07/2021 00:05 | Ngwa, Technology
Igwe onyunyo onyonyo nwere nchedo 360 na-enye gị ohere ijikwa ma nyochaa nnukwu akụrụngwa dị na ụlọ, na-ekewa echiche ha na mbugharị iji chọpụta nkọwa nkeji nke ha, na-enweghị ọnwụ nke onyonyo.
1 Kedu ihe igwefoto onyunyo vidiyo 360?
2 Uru nke ụdị igwefoto a
3 Nche na zuru ezu
Kedu ihe igwefoto onyunyo vidiyo 360?
Igwefoto ogo 360 bụ ngwaọrụ teknụzụ ọhụụ nwere ikike ịse foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo site na anya anya obosara, nke na-ejide gburugburu ebe obibi site na ihu na azụ, na mgbakwunye na gụnyere n'akụkụ, uko ụlọ na ala nke gburugburu ebe obibi n'okpuru ọhụụ gị.
na Movistar Prosegur Igwefoto mkpu na-eji dị ka akụkụ nke ha nche na usoro na- nweta nchebe ka ukwuu, kpọmkwem n'ihi na ha bụ ndị zuru oke ma tinye ọystụ njikwa enwere ike ulatedmehe site na mkpanaka site na ngwa yana njikọ Wi-Fi.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịlele ihe niile na-eme n'ime ụlọ gị, ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa site na ebe ọ bụla ọzọ ị nọ.
Uru nke ụdị igwefoto a
Site n'inwe igwefoto onyunyo onyonyo 360 ọ na-atọ gị ụtọ imikpu kachasị na gburugburu ebe obibi, na-elele foto ma ọ bụ vidiyo site na ngwaọrụ n'ihe gbasara ịdị elu ma na-atụgharị ya na mmasị gị iji nlezianya weghara akụkụ gị niile, na mgbakwunye:
Ga-enwe ike ịnweta foto na vidiyo dị ndụ nke echekwara n'igwe ojii, iji ha mee ihe ma ọ bụrụ na ha dị mkpa dị ka ihe akaebe nke mpụ ma ọ bụ mwakpo.
Ọtụtụ n’ime ha nwere odiyo abuo di ka akuku nke nkwughari okwu ha, nke nwere ike ịdị mkpa ma ọ bụrụ na mberede. Ọrụ a na - enye gị ohere isoro ụmụaka gị, ndị ikwu meworo okenye ma ọ bụ anụ ụlọ kwukọrịta, iji hụ na ha dị mma.
Enwere ụdị na imewe dị iche iches, nke na-enye ohere ọ bụghị naanị iji dozie ha na mgbidi kamakwa iji jiri ha na-agagharị agagharị, ka e jiri akọ tinye ya na gburugburu ebe ọ bụla ịchọrọ inyocha.
Site n'inwe 360º n'akuku na-enye gị echiche zuru oke, na-ebelata mkpa ọ dị iji ọtụtụ kamera ndị ọzọ, na-enye mkpuchi zuru oke na gburugburu ebe obibi.
Ejiri teknụzụ infrared LED ha nke mere na ị ga-enwe ekele maka ihe omume nile nke ha jidere, ọbụlagodi na ọkụ anaghị apụ.
Jikwaa ihe niile ị na-eme n’ebughị ụzọ hapụ ihe ndina gị ma ọ bụ nọrọ ebe ahụ; Ebe Movistar Prosegur Alarmas na-enye gị ngwa mkpanaka jikọtara na kamera onyunyo vidiyo gị na nchekwa 360, nke ị nwere ike iji naanị site na ịnweta ịntanetị na inwe Wi-Fi.
Igwefoto teknụzụ ndị a nwere oke ga-ekwe nkwa nzuzo gị, ebe ọ bụ naanị ndị ikike nwere ohere ịnweta ha na ozi ha na-eme njem n'ụdị ezoro ezo iji zere nsogbu nke mgbochi ma ọ bụ cyberattacks.
Ngwa nke Movistar Prosegur Alarmas webatara ga-abụ ezigbo onye enyemaka, ebe ọ bụ na site na ya ị nwere ikeị ga-enweta amamọkwa na-egosi mmemme ọhụụ ọ bụla; Can nwere ike ịnweta E ke dere n'oge ikpeazụ 30 ụbọchị na ọbụna ibudata na ịkọrọ ha.
Mbugharị nke igwefoto ogo 360 dị egwu, yabụ ị ga-enwe ekele maka ihu zuru ezu ma ọ bụ akụkụ ọ bụla na-adọta uche gị.
Nche na zuru ezu
Obi abụọ adịghị ya, kamera onyunyo vidiyo nwere nchedo 360 bụ Kacha ọhụrụ ngwaọrụ ị ga-ahụ taa iji zuo ezu oti mkpu gị usoro; Na ha ọ ga-ekwe omume ịme njem nlegharị anya n'ime gburugburu, naanị site na itinye ha n'ogo dị mma na ọnọdụ nke na-enye ohere ị nweta ọtụtụ akụkụ.
Ọhụụ ahụ igwefoto ruru awade otu ahụmahụ dị ka ma ọ bụrụ na ị na-eleta ebe ana-azu umuanu, na mgbakwunye na ohere nke mbugharị iji see foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọtụtụ ndị ọrụ kpebiri iji ụdị igwefoto igwefoto dị ka akụkụ nke usoro mkpu ha; kpomkwem n'ihi ya ntụgharị, ọdịdị oyiyi na ohere nke nkwukọrịta.
Ọ bụ nhọrọ kachasị mma, ebe ọ nwere oghere oghere 72'2º na ntụgharị 360 and, nke a ga-eji kpali ya gburugburu jide nkeji nkọwa na nnukwu oghere, na-abata na ihe oyiyi iji kọwaa akụkụ ọ bụla a na-ewere dị ka nke na-enyo enyo ma mee ka ndị isi ruru eru mara n'oge.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibi nwayọ ma chebe nchekwa nke ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị, yana igbochi ihe onwunwe gị ka ndị omekome ghara imebi gị, na Movistar Prosegur Alarmas ị ga-ahụ kit nke na-egbo mkpa gị na mmefu ego gị.
Ọ na-atụ aro ka i nwere dịkarịa ala otu n'ime ndị a mobile ese foto, nke mere na ị nwere n'aka gị njikwa niile nke nchekwa gị, ma ị nọ n'ụlọ ma ọ bụ na mpụga ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igwe onyonyo onyonyo nwere nchedo 360